Ama-exchange rates we-izimali zeDividenti emhlabeni jikelele. Ideshibhodi yakho siqu ngezinga lokushintshanisa, amashadi kanye nekhanda lemakethe ye-idijithali yemali ekhethiwe. I-8782 idijithali yemali idatha yesikhathi sangempela.
USD - US dollar BTC - Bitcoin EUR - Euro GBP - okokuphrinta JPY - Yen CNY - yuan RUB - Ruble Russian AUD - Aussie dollar AZN - Manat Azerbaijani ALL - Lek Albanian DZD - Dinar Algeria XCD - Dollar East Caribbean AOA - Kwanza MOP - Pataca Macanese ARS - Peso Argentine AMD - Dram-Armenian AWG - Florin UmAruba AFN - Afghani Afghan BSD - Dollar Bahamian BDT - Bangladesh Taka BBD - Barbados dollar BHD - Bahrain dinar BYR - Ruble Belarusian BYN - Ruble Belarusian BZD - Belize dollar XOF - CFC franc BMD - Bermuda dollar BGN - Lev Bulgarian BOB - Boliviano saseBolivia BAM - Bosnia and Herzegovina uphawu convertible BWP - Botswana Pula BRL - Brazilian real BND - Brunei dollar SGD - Singapore dollar BIF - Burundi franc BTN - Bhutan Ngultrum INR - Rupee Indian VUV - Vanuatu Vatu HUF - Forint Hungarian VEF - WaseVenezuela Bolivar fuerte VND - Vietnamesse dong XAF - CFC franc HTG - Gourde Haitian GYD - Guyana dollar GMD - Gambian dalasi GHS - Ghana Cedi GTQ - Quetzal laseGuatemala GNF - Guinea franc GIP - Gibraltar ganda HKD - Hong Kong dollar HNL - Hondura Lempira GEL - Lari Georgian DKK - Umqhele Danish DJF - Djibouti franc DOP - Dominican peso EGP - Ganda Egyptian ZMW - Zambian Kwacha MAD - Dirham Moroccan ZWD - Dollar Zimbabwean ILS - Israeli yeshekeli entsha IDR - URupiah Indonesian JOD - Jordan dinar IQD - Iraqi Dinar IRR - Rial Iranian ISK - Iceland krone YER - Rial Yemeni CVE - Cape Verde Escudo KZT - Kazakhstani Tenge KYD - Cayman Islands dollar KHR - Riel Cambodian CAD - Dollar Canadian QAR - Riyal Qatari KES - Kenya usheleni COP - Peso Colombian KMF - Franc Comoran CDF - Franc Congolese KPW - North Won Korean KRW - Won South Korean RSD - Dinar Serbian CRC - Costa Rica colon CUP - Peso Cuban KWD - Dinar Kuwaiti NZD - New Zealand dollar KGS - Som Kyrgyzstani LAK - Lao Kip LVL - Latvian lat LSL - Lilangeni ZAR - Rand LRD - Liberia dollar LBP - Ganda Lebanese LYD - Dinar waseLibya LTL - Litas Lithuanian CHF - Franc Swiss MUR - Mauritius Rupee MRO - Ouguiya Mauritanian MGA - Ariary Malagasy MKD - Denar Macedonian MWK - Malawi Kwacha MYR - Malaysin Ringgit MVR - Rufiyana Maldivian MXN - Peso Mexican MZN - Metical waseMozambique MDL - Leu baseMoldova MNT - Tugrik-Mongolian MMK - Kyat Burmese NAD - Dollar Namibian NPR - Rupee Nepalese NGN - Naira Nigerian ANG - Gulden Antilliaanse NIO - Cordoba baseNicaragua XPF - French Pacific franc NOK - Krone Norwegian AED - UAE Dirham OMR - Rial Omani SHP - Saint Helena ganda PKR - Pakistan Rupee PAB - Balboa Panamanian PGK - kina PYG - Guarani PEN - Peruvian Nuevo Sol PLN - Zloty Polish RWF - Franc baseRwanda RON - Leu Romanian XDR - SDR (Special drawing amalungelo) SVC - Ikholoni El Salvador WST - Tala STD - São Tomé and Príncipe Dobra SAR - Riyal Saudi SZL - Lilangeni TRY - New Turkish lira SCR - Seychelles Rupee SYP - Ganda Syrian SKK - Slovak koruna SBD - Solomon Islands dollar SOS - Usheleni waseSomali SDG - Ganda Sudanese SRD - NaseSurinam dollar SLL - Leone TJS - Somoni Tajikistani THB - Baht Thai TWD - Dollar entsha Taiwan TZS - Usheleni Tanzanian TOP - pa`anga TTD - Trinidad and Tobago dollar TND - Dinar Tunisian TMM - Turkmenistan manat TMT - Turkmenistan manat entsha UGX - Uganda usheleni UZS - Uzbekistan sum UAH - hryvnia UYU - Peso Uruguay FJD - Fiji dollar PHP - Philippines peso FKP - Falkland Islands ganda HRK - Kuna Croatian CZK - Koruna Czech CLP - Peso Chilean SEK - Krona Swedish LKR - Sri Lanka Rupee ERN - Nakfa ETB - Ethiopian Birr JMD - Dollar Jamaican SSP - Ganda South Sudanese CLF - BaseChile Unidad de Fomento EEK - Kroon Estonian GGP - Guernsey ganda IMP - Manx ganda JEP - Jersey ganda MTL - Lira Maltese XAG - I-Troy ounce yesiliva XAU - Igolide elilodwa le-Troy / igolide electronic) ZMK - Zambian Kwacha ZWL - IZimbabwe dollar ATS - Usheleni Austrian AON - Angolan Kwanza entsha BEF - Franc Belgian GRD - Lwesiliva Greek IEP - Ganda Irish ESP - Peseta Spanish ITL - Lire Italian CYP - Cyprus ganda DEM - Deutsche mark NLG - Netherlands Guilder PTE - Escudo Portuguese SIT - Tolar Slovenian SRG - NaseSurinam Guilder FIM - Uphawu Fin FRF - France frank ECU - ECU YUM - Yugoslavian dinar entsha
BTC = 66 650.05 USD
+4 042.057 (+6.46%)
1 165 716 036 792.70 US dollar
-4 944 988 400.50 USD (-0.42%)
ETH = 4 087.98 USD
Ethereum ikhanda lemakethe
447 539 185 816.58 US dollar
-9 225 553 503.18 USD (-2.02%)
XRP = 1.15 USD
51 165 906 520.87 US dollar
-501 963 835.34 USD (-0.97%)
BCH = 644.80 USD
Bitcoin Cash ishadi elibukhoma lentengo
11 593 405 053.31 US dollar
-46 750 633.39 USD (-0.40%)
EOS = 4.66 USD
EOS ishadi elibukhoma lentengo
4 285 347 604.92 US dollar
+9 542 857.88 USD (+0.22%)
Amanani wokushintshaniswa kwemali yeDijidali ku-intanethi, inani lesikhathi sangempela
Zonke izikhala ze-idijithali yemali ngamanani abo ajwayelekile namhlanje.
Zonke izikhala ze-idijithali yemali ngenani labo elihle namuhla.
Zonke izikhala ze-idijithali yemali nge-capital and capital of commerce namuhla.
Amanani okushintshana kwe-Idijithali yemali kuwebhusayithi yethu akhombisa intengo yamanje yanoma iyiphi i-izimali zeDividenti ekhethiwe yanamuhla. Izintengo zokushintshana kwe-Idijithali yemali zibalwa njengamanani aphakathi kwazo zonke izimakethe ze-crypto emhlabeni lapho lokhu kuthengiswa kwe-idijithali yemali namuhla. Ungalandela isilinganiso sokushintshwa kwemali ye-elekthronikhi ukuthola izinga lokushintshanisa elingcono kakhulu le-idijithali yemali ukuthenga nokuthengisa.
Amanani okushintshana nge-idijithali yemali yendawo yethu ayavuselelwa njalo ngemizuzwana engama-30. Funda amazinga okushintshaniswa kwe-crypto ku-inthanethi mahhala futhi manje ngesikhathi sangempela.
Intengo yokushintshanisa ye-idijithali yemali ithengiswa kuma-crypto-exchanges ahlukahlukene kanye naku-crypto-izimakethe. Ngokungafani nemali yakudala, akekho obeka isilinganiso sayo sanamuhla noma kusasa. Ekushintshisaneni ngakunye kwe-idijithali yemali, izinga lokushintshanisa le-idijithali yemali lishintsha ngezikhathi ezihlukile. Ukuze uqonde ngokunembile isilinganiso se-idijithali yemali, manje udinga ukubala ngokushesha inani elijwayelekile lesilinganiso sokushintshana kuzo zonke izimakethe ze-crypto.
I- Cryptoratesxe.com ibala isilinganiso samanje sokushintshaniswa kwezibalo ze-idijithali yemali kuzo zonke izimakethe ze-crypto.
Ukushintshwa kwe-Idijithali yemali, amanani online
Sihlala sibheka 8782 amazinga okushintshaniswa kwe-idijithali yemali kuzo zonke izimakethe ze-crypto emhlabeni.
Ungalandela umkhondo wesilinganiso sokushintshaniswa sesihlobo esisodwa se-idijithali yemali kwesinye usebenzisa iphaneli yomuntu siqu. Izinga le-crypto liboniswa ngesimo samagrafu nezinombolo, izinguquko zamanani ziboniswa emkhakheni ohlukile ngamaphesenti. I-Idijithali yemali ekhulayo kanye ne-cryptocur lwemali eyehlayo iboniswa ngemibala ehlukene.
Izinga eliphakeme lokushintshana kwe-idijithali yemali.
Amanani wokushintshanisa amahle kakhulu we-cryptocur lwemali angafundwa eshadini lezinguquko ezisheshayo ezilinganisweni ze-idijithali yemali kumaphaneli wesayithi noma ekhasini lesilinganiso sokushintshaniswa kwe-idijithali yemali ekhethiwe online. Lapho isilinganiso se-idijithali yemali sikhombisa inani elincane - lesi isikhathi esihle kakhulu sokuthenga, futhi lapho i-idijithali yemali ifinyelela isilinganiso esiphezulu sokushintshwa - yisikhathi esihle kakhulu sokuthengiswa kwe-crypto.
Bitcoin lanamuhla 21 October 2021
Isilinganiso sokushintshaniswa se Bitcoin yanamuhla ulwazi oluyisisekelo olusetshenziswa ngabantu abaningi. Ungathola isilinganiso se- Bitcoin yanamuhla kunoma iyiphi i-idijithali yemali nakunoma yiluphi uhlobo lomhlaba emhlabeni kwiwebhusayithi yethu.
Sibonisa amazinga okushintshana awo wonke ama-cryptocurrensets nsuku zonke futhi sazi isilinganiso hhayi nje sanamuhla, kodwa futhi nsuku zonke.
Bitcoin izinga lokushintshaniswa kwemali ye-idijithali yemali yangakusasa 22/10/2021
The Bitcoin I-cryptocur lwemali kusasa, 22/10/2021 kwakhiwa ngenani elijwayelekile ngosuku olususelwa ku Bitcoin ukuhweba ngokushintshaniswa kwe-crypto namuhla. Kusasa Bitcoin liyisisekelo sokushintshaniswa Bitcoin ngamanani wokushintshana ngo 22/10/2021.
Ngakho-ke, ngokubheka izinguquko ze Bitcoin ekushintshisaneni kuwebhusayithi yethu phakathi nosuku, ungabikezela isilinganiso Bitcoin yangakusasa namanani wokushintshana we Bitcoin ezindaweni zokushintshana online kusasa 22/10/2021.
Setha Bitcoin ekhasini eliyinhloko lewebhusayithi yokushintshaniswa kwemali ye-idijithali yemali bese ubuka Bitcoin online. Uzohlala uthatha ngokunembile isilinganiso se Bitcoin yangakusasa.
Izinga lokushintshana le Bitcoin ngokumelene nedola namuhla
Bitcoin yokushintshaniswa kwedola namuhla yinto ehamba phambili Bitcoin isilinganiso sokushintshana emakethe yomhlaba. Inani lokushintshana le Bitcoin ngokumelene nedola elinquma inani lokushintshana le Bitcoin ngokumelene nezinye imali.
Ungabona i- rate of Bitcoin kuya ku-dollar online online .
Izinga lokushintshana le Bitcoin ngokumelene ne-euro namuhla
Izinga lokushintshana le- Bitcoin kwi-euro yanamuhla nalo lwethulwa kwiwebhusayithi cryptoratesxe.com
Bitcoin kusilinganiso se-Euro sanamuhla - ishadi le- Bitcoin isilinganiso ku-Euro yisilinganiso sawo wonke ama-exchanges we-crypto.
Bitcoin ukuqhathanisa ne-euro njengenye yezimali ezinkulu emhlabeni ezinqumayo Bitcoin isilinganiso sokushintshana ngokumelene nezinye zezimali zomhlaba. Ithrekhi Bitcoin izinga lokushintshaniswa kwanamuhla kudeshibhodi online yewebhusayithi yethu.
Izinga lokushintshana le Ethereum ngokumelene nedola namuhla
Ethereum kuya ku-dollar rate yanamuhla - isilinganiso Ethereum manje selivele likhona konke okuthengiswayo emakethe ye-crypto yomhlaba. The Ethereum ukuya kudola sinquma i Ethereum kwezinye imali kanye nama-cryptocurrensets.
Ungabona i- rate of Ethereum kuya ku-dollar online online .
Izinga lokushintshana le Ethereum ngokumelene ne-euro namuhla
Izinga lokushintshana le- Ethereum kwi-euro yanamuhla nalo lwethulwa kwiwebhusayithi cryptoratesxe.com
Ethereum kusilinganiso se-Euro sanamuhla - ishadi le- Ethereum isilinganiso ku-Euro yisilinganiso sawo wonke ama-exchanges we-crypto.
The Ethereum ku-euro nedola njengoba lwemali ephambili yomhlaba ibeka isisekelo se Ethereum kuzo zonke zezimali zomhlaba. Landela Ethereum yanamuhla kumaphaneli online wewebhusayithi yethu.
Izinga lokushintshana le Litecoin ngokumelene nedola namuhla
Izinga lokushintshanisa Litecoin ukuya edoli namuhla - isilinganiso esimaphakathi se- Litecoin manje isendalini yokushintshaniswa kwe-crypto. Izinga le- Litecoin ukuya kudola inquma inani lama- Litecoin kuzimali ezahlukahlukene nakuma-izimali zeDividenti.
Bheka Litecoin ukuze isilinganiso sokushintshwa kwedola online .
Izinga lokushintshana le Litecoin ngokumelene ne-euro namuhla
Izinga lokushintshanisa Litecoin ku-Euro yanamuhla ikhonjisiwe lapha ekhasini elikhethekile.
Litecoin kwi-euro yanamuhla - online Litecoin ku-euro yisilinganiso sokushintshaniswa kwe-idijithali yemali.
The Litecoin ku-euro nedola njengoba lwemali ephambili yomhlaba ibeka isisekelo se Litecoin kuzo zonke zezimali zomhlaba. Landela Litecoin yanamuhla kumaphaneli online wewebhusayithi yethu.
Izinga lokushintshana le XRP ngokumelene nedola namuhla
Bona i- XRP isilinganiso ku-dollar online .
The XRP ukuya kudola namuhla - isilinganiso XRP njengamanje ekuhwebeni kwe-crypto. The XRP ukuya kudola sinquma i XRP kuzo zonke ezinye izinhlobo zezimali nama-cryptocurrensets.
Izinga lokushintshana le XRP ngokumelene ne-euro namuhla
Isigaba se- XRP esilinganisweni sokushintshana kwe-Euro sanamuhla sikhonjisiwe ekhasini elihlukile.
XRP ku-euro yanamuhla - XRP kwi-euro online liyisilinganiso sokushintshaniswa kwe-idijithali yemali.
Izinga le- XRP ukukhuphuka kwe-euro nedola njengemali ephambili yisisekelo sezinga le- XRP kuzona zonke ezinye imali. Landela intengo ye- XRP yanamuhla emazingeni wokushintshaniswa kwewebhusayithi yethu online.